कोरोनाकै गतिमा आतंक प्रसारण नगरौं - फ्री प्रेस नेपाल
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०२:१०
in भिडियो, मिडिया क्रिटिक, विविध, समाज
अहिलेसम्म विदेशबाट फर्किएका पाँचजनामा कोरोना सक्रमित देखिएकोछ । यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म महामारी रुप लिइसकेको कोरोना भाइरसले कसैको ज्यान लिइसकेकोछैन ।
११ चैतमा कोरोना अस्पताल भरतपुरमा मरेका जनकपुरका सन्तोष यादव, १२ चैतमा मृत घोषणा गरिएको कास्कीका विश्वबन्धु नेपाली र १६ चैतमा बुटवलको क्वारेन्टाईमा वितेका बाबुराम थापालाई कोरोना लागेको आशँका गरिएतापनि परिक्षणबाट ति कोरोनामुक्त देखिए ।
१७ चैतमा वीर अस्पतालमा २ र पाटन अस्पतालमा मरेका विमारीलाई पनि कोरोनाको आँशका गरिएकोछ । तिनलाई पनि अन्य ३ लाई झैं कोरोनाको लक्षण देखिएकोथियो । तिनको परिक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
अहिले कोरोनाको नाममा समाजमा चलिरहेको अछुत बनाउने फोबियाले अन्य विरामीहरुले सही उपचार पाउन सकिरहेकाछैनन् । यो समय मौसमी रुघाखोकी, ज्वरो र टाउको दुख्ने विरामी बढ्ने समय हो । तर यस्तो प्रचार गरिएकोछ कि यी लक्षण देख्नासाथ कोरोना लागेको आशँकामा अछुतको ब्यवहार शुरु गर्न थालिएकोछ ।
तिनलाई सिधै कोरोना अस्पतालमा लगेर या नजिकै बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखेर एक खालको यातना दिन थालिएकोछ मृतकहरु पहिल्यै देखिका विरामी थिए । तिनका समस्या राम्ररी नबुझी क्वारेन्टाइनमा राखेर गर्नुपर्ने उपचारबाट बन्चित गरियो । त्यसका कारण पनि हुनसक्दछ, तिनको ज्यान गएको ? जसको प्रमाणिक पुष्टि हुन बाँकी छ ।
इतिहासमा फैलिएका महामारी भाइरसको तुलनामा कम खतरनाक कोरोना भाइरसले ज्यान लिने भन्दापनि दुख दिने हुनाले धेरैमा सक्रमित नहोस् भनि सावधानी अपनाईन्छ । दवाई त अहिलेसम्म धेरै यस्ता रोग छन्, जसको बनेकैछैन । कोरोना भन्दापनि ति खतरनाक छन् । त्यसैले आतँकित भन्दापनि बलियो आत्मविश्वास सहित यसबाट बच्न सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा समाजमा झन बढी आतँक फैलाइएकोछ ।
विरामीको आधा रोग आत्मविश्वासले सन्चो हुन्छ भनिन्छ। यसरी आतँक फैलाइएपछि बिरामीको मनोबल कमजोर भए दवाईले पनि राम्ररी काम नगर्ने नै भो ! मैले शुरु देखि नै भनिरहेको के हो भने आफु पनि आतँकित नहौं र इन्टरनेटबाट अरुलाई आतँकित नपारौं । यति मात्र गरिदिए मान्छेले अनाहकमा डर र त्रासमा बाँच्नुपर्ने थिएन । डरका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरुले सामान्य रोगीहरुलाई पनि अछुतको ब्यवहार नगरि उपचार गरिदिनेथिए ।
कसैले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले यहाँ फेरि पनि दोहोर्याउँछु – आतँकित नबनौ र कोरोनाकै गतिमा आतँकको प्रसार पनि नगरौं । बाँकी भिडीयोमा हेर्नोस्: